सक्षम डाक्टर नेपाल मै छन – मदनकृष्ण श्रेष्ठ
गफगाफ - वरिष्ठ हास्यव्यंग्य कलाकार मदनकृष्ण श्रेष्ठ बिगत केहि समय देखि अस्पतालमा थिए । करिव ४ वर्ष अघि उनको पार्किनसन्सको अप्रेसन गरिएको थियो । ठिक त्यहि रोग पुन देखिए पछि उनको दोस्रो पटक मष्तिस्कको सफल शल्यक्रिया भएको छ । काठमाण्डमैको माइतिघर नजिकै रहेको अन्नपूर्ण न्यूरो अस्पतालमा गत भदौ २८ गते भर्ना भएका थिए । डिप ब्रेन स्टुमुलेसन (डीबीएस) शल्यक्रिया पछि उनी हिजो असोज २ गते घर फर्केका छन् । अस्पतालका डा. रेशा श्रेष्ठ र डा. बसन्त पन्तले शल्यक्रिया गरेका थिए । पार्किन्सन्स रोगबाट पिडित श्रेष्ठको चार वर्षअघि मस्तिष्कको बायाँतर्फ चिप्स राखिएकोमा अहिले शल्यक्रिया गरी दायाँ साइडमा पनि राखिएको हो । यस शल्यक्रियाले ८ वर्ष सम्म काम गर्ने र त्यस पछि भने पुन त्यसको व्याट्रि परिवर्तन गर्नुपर्ने बताइएको छ ।
शल्यक्रिया पश्चात उनि पहिलेको तुलनामा निकै फुर्तिला देखिएका थिए । अस्पतालमा उपस्थित सबैलाई उनि आफैले हसाइरहेका थिए । उनको त्यस अवस्थामा पनि देखिएको अटुट मुस्कानका कारण कसैलाई पनि उनि बिमारी भएको महशुस नै हुदैन थियो । उनि भनिरहेका थिए “म बिरामी भएको छैन , शल्यक्रिया पश्चात पहिलेको भन्दा झन तगडा भएको छु । मलाइ त डिस्चार्ज भएकै दिन गीत रेकर्ड गराउन जान मन थियो तर किन यसरी आत्तीहाल्नु भनेर गइन ” ।
उनको मस्तिष्कको बायाँतर्फ राखिएको चिप्सले शरीरको दायाँ भाग चल्ने गरेको छ । तर वायाँतर्फ पनि समस्या आएपछि अहिले दायाँतर्फ चिप्स राखिएको हो । अब भने दायाँ भागमा राखिएको चिप्सले बायाँतर्फ र बायाँ भागमा राखिएको चिप्सले दायाँ तर्फको काम गर्छ । पार्किन्सन्स नियन्त्रणका लागि उनको दिमागमा राखिएको पेसमेकरमा अर्को तार पनि जोडिएको छ । श्रेष्ठ ९ वर्षदेखि पार्किन्सन्सबाट पिडित छन् । यो शल्यक्रिया नेपालमै पहिलोपटक श्रेष्ठमा गरिएको बताइएको छ । श्रेष्ठ भन्छन “ नेपाल स्वास्थ्य क्षेत्रमा धेरै अघि बढि सकेको छ । हामीलाई हामैै्र देशको स्वास्थ्य संस्था सग विश्वास नभएर मात्र विदेश जाने हो तर अवसर पाए नेपाल मै ठुला रोगहरुलाई नियन्त्रण गर्न सक्षम डाक्टरहरु छन । उदाहरणका निम्ति मेरै रोग हेरौ । मैले देवै पटकको शल्यक्रिया यहि गरेको हु र म सफल भइसके । ” मह जोडिले निर्माण गर्न लागेको चलचित्र दालभात तरकारी मा मदनकृृष्ण श्रेष्ठको मुख्य भुमिका रहने छ । केहि समयको आराम पश्चात सोहि चलचित्रको तयारीमा लाग्ने श्रेष्ठको भनाई रहेको छ ।
रंगशाला निर्माणमा जुटे धुर्मुस सुन्तली
गफगाफ - भरतपुर महानगरपालिका वडा नं १५ मा निर्� पुरा पढ्नुहोस
तिमी पनि कस्तो जिस्कन्छौ भन्या म काँ दुःखी छु त ??
फर्सि र गान्टे मुला एउटा पार्कमा बसेर गफ गरीरहेका थिए त� पुरा पढ्नुहोस
कटरिनाको कार सूचिमा थपियो २ करोडको ‘रेन्ज रोभर’
गफगाफ : - बलिवुड अभिनेत्री कटरिना कैफले नयाँ कार पुरा पढ्नुहोस
’ट्रिब्युट टु मेगास्टार राजेश हमाल’
गफगाफ - राजधानीमा एक कार्यक्रमको आयोजना गर्दै अभिनेता र� पुरा पढ्नुहोस
नेतृ भुसालले जानी नजानी हेरेपछि
गफगाफ - नेकपाकी महिला नेत्री पम्फा भुषा� पुरा पढ्नुहोस